Shina Heshida Multifunction malaza ho an'ny Exterior rindrina coating mpanamboatra sy mpamatsy | Meihe
Heshida Multifunction malaza ho an'ny rindrina ivelany anatiny
Fitambaran'entana: 900-100 Square Meter / 10kgs
Heshida Multifunction ivelany ivelany rindrina vovoka maina ampiasaina amin'ny endrika fanavaozana iraisam-pirenena, tsy misy fandotoana ny tontolo anatiny sy ivelany. Ity vokatra ity dia manana hery manafina, fametahana, rano azo antoka ary porofon'ny vovoka mahery vaika, fanoherana tsara amin'ny famolavolana sy fiadiana amin'ny alkali.Izany dia misy fiantraikany mahery vaika sy ny asa fanompoana lava.
Mety amin'ny fanamboarana sy fiarovana ny rindrina vita amin'ny konkretera, rindrina betonika, rafitry ny tranoben'ny tranobe isan-karazany, toy ny fanavaozana sy famaritana ireo trano taloha.
3. maherin'ny 50.000 fotoana amin'ny fikobiana, mihoatra ny 25 fotoana ny fenitra nasionaly;
4. Ny fotoan'ny fahanterana amin'ny zavakanto dia mihoatra ny indroa ny fenitra nasionaly;
5. Ny sarimihetsika dia hentitra ary fanoherana.
6. Ny fanoherana ny rano tsara sy ny fofon'aina;
7. Hery manafina sy maharitra;
8. Famonoana afo A2.
OffManary ny fitaovana mitsingevana miaraka amin'ny loha maloto ary mandrosona 2 hatramin'ny 3 minitra.
⑤Nampidiro rano mandra-pahatongan'ny 10 ~ 15 Cm avy any an-tampon'ny andaniny. Mampiasa indray ny foza mandritra ny 30 segondra Ny tampon'ny tampon'ilay andian-dàlana, ny taham-pon'ny vovo-dronono ho rano 1: 1,4）
Previous: Heshida hoso-doko avo lenta ho an'ny zavakanto ivelany ivelany
Manaraka: Heshida kalitao fampiharana tsara indrindra Outer Wall Paint
Manorina sary hosodoko
Volavola vita amin'ny rindrina anatiny
Ny valindrina amin'ny rindrina ivelany
Sarotra haingon-trano anatiny